Ole Gunnar Solskjær oo qiray in Donny van de Beek uusan ku faraxsanayn garoonka Old Trafford – Gool FM
(Manchester) 24 Jan 2021. Tababaraha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa qiray in xiddigiisa reer Holland ee Donny van de Beek uusan ku faraxsanayn garoonka Old Trafford sababo la xiriira ka qeyb gal la’aantiisa kulamada kooxda.
Van de Beek ayaa ku soo biiray kooxda Manchester United xagaagii hore, isagoo kaga yimid naadiga Ajax, aduun dhan 35 million pounds, laakiin wuxuu fursad uu ku safto kulamada ka heli waayay tababare Ole Gunnar Solskjær.
Van de Beek wuxuu ka qeybqaatay 21 kulan xili cayaareedkan dhamaan tartamada, waxaana ka mid ah 10 kulan oo horyaalka Premier League ah, kaliya labo ka mid ah ayuu ku soo biloowday.
Haddaba wargeyska “Goal” ee dalka England ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ma dhihi doono Donny van de Beek wuu faraxsan yahay, dabcan wuxuu doonayaa inuu ciyaaro wax badan, laakiin shaqadiisa si sax ah ayuu u qabanayaa.”
“Wuxuu in badan i soo xasuusiyaa aniga nafteyda markii ugu horeysay ee aan imid Manchester United (ciyaaryahan ahaan), marka wuu fahamsan yahay dhibaatooyinka aan soo maray iyo caqabadaha.”
“Waxaan xaaladan oo kale galay markii Sir Alex Ferguson uu iiga tagay banaanka, waan fahmay, oo waxaan ku faraxsanaa guusha kooxda, Donny isagu waa nooca ciyaartoydaas.”
“Wuu ogyahay inuu muhiim noo yahay, wuuna ogyahay inuu ciyaari doono kulamo badan, xaqiiqdii wuxuu qeyb ka noqon doonaa kulanka Liverpool, waana qodobka ugu muhiimsan ee kulanka, wuxuu ku kalsoon yahay tayadiisa, waa xiddigku kalsoon naftiisa, wuxuuna kaliya sugayaa fursadiisa.”
Shaxda rasmiga ah kulanka Serie A ee Kooxda Juventus iyo Bologna oo la shaaciyey... (Matthijs de Ligt oo...)